YATHAZONE - Page 8 of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
တစ်ရက်မှာ ဆရာမ ဖြစ်သူက ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ၉ အလီကို ချရေးလိုက်တယ် ။
တစ်ရက်မှာ ဆရာမ ဖြစ်သူက ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ၉ အလီကို ချရေးလိုက်တယ် ။ ၉ x ၁ = ၇ ၉ x ၂ = ၁၈ ၉ x ၃ = ၂၇ ၉ x ၄ = ၃၆ ၉ x ၅ = ၄၅ ၉ x ၆ = ၅၄ ၉ x ၇ = ၆၃ ၉ x ၈ = ၇၂ ၉ x …
ပန်းဘဲဆရာကြီးရဲ့ဆုံးမစကား တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးတယောက်ဟာ ဓားကျိုးလေး နှစ်စကိုင်ပြီး အဖိုးဖြစ်သူ ပန်းဘဲဆရာထံ ရောက်ခဲ့တယ်…. ” အဖိုးရေ အဖိုး အဖိုးရေ…. ” ဟေ..! ဘာလဲကွ မင်းမှာလည်း အလန့်တကြားနဲ့ ဘာကိစ္စရှိလို့လည်းကွ….” ထိုအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ မျက်ရည်စလေးဝဲပြီး တခုခုကိုကြောက်ရွံ့သော အနေထားဖြင့် …. “ဟိုလေ…! အဖိုး မနေ့ကသား ကျောက်တုံးကို ခုတ်ကစားနေရင်း ဓားမကြီးက ကျိုးသွားလို့ပါအဖိုး အဖေပြောတယ် ဓားအသစ်မရရင် အိမ်မပြန်လာနဲ့တဲ့ သားကို ကယ်ပါဦးအဖိုးရယ် ဓားမှမရရင် သားအိမ်ပြန်မရဲလို့ပါ….” ” မင်းကလည်းကွာ တတ်တတ်ဆန်းဆန်း ကျောက်တုံးကိုမှ ဓားနဲ့ခုတ်ရတယ်လို့ကွာ…” ” ဟာ အဖိုးကလည်း သားပထမ အစမ်း ခုတ်ကြည့်ပြီးပါပြီဗျ ဓားကမှ …
ခြင်ဒဏ် သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ခြင်ဒဏ် သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ပုလင်းအလွတ် တစ်လုံးတွင် သကြားရေ ထည့်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဘီယာ ပုလင်းကိုလည်းကောင်း အမှောင်ကျသောာ နေရာတွင် ထားပါ။ ခြင်များ အချို ရနံကို ရရှိ၍ ပုလင်း၀ ဆီသို့ သွားကပ်ပြီး ဘီယာ နှင့် သကြားရေတွင် ကပ်သေ ကုန်လိမ့်မည်။ ကြိုချက်ပြီးသော တရုတ်ရှာလကာရည်ကို ပန်းကန်ထဲတွင် ထည့်ပြီး အခန်းထဲတွင် ထည့်ထားပါ။ တံခါး ပိတ်စရာမလိုပါ။ တစ်ညလုံး ခြင်များ၏ နှောက်ယှက်မှု ရန်မှ ကင်းဝေးမည်။ လိမ္မော်ခွံခြောက်ကို အခန်းထဲတွင် ထွန်းညှိထားကာ ခြင်ဆေးခွေအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အခန်းတွင်း၏ အောက်သိုးသိုး အနံကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ အ ခန်း ထဲ …
ကျနော် မိန်းမယူပီး ရင် မိန်းမ ကို ဒီလိုလုပ်ခိုင်းမှာ
ကျနော် မိန်းမယူပီး ရင် မိန်းမ ကို ဒီလိုလုပ်ခိုင်းမှာ မိန်းမ ထစမ်း အခုချက်ချင်းထ မင်းအမေအိမ်မှာလို အိပ်လို့မရဘူး …။ နာရီကြည့်ဦး ၈နာရီ ထိုးတော့မယ် ကိုရုံးသွားရဦးမယ် …။ 😕😕😕 ~ထ ထ သွားမျက်နှာသစ် ရေမိုးချိုး စင်ပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေး အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီးပြီ …..။ 😁😁😁 ~ပီးရငျ သနပျခါးလိမျးဖို့ သှေးထားပီးသား မငျးဝတျဖို့အကငြျ် ီဟိုမှာ အဆငျသင့ျခထြားတယျ …။ 😁😁😁 ~သြော် ထစမ်း ငါကွာ😐 စောင်တေခေါက်မလို့ ဘေးဖယ် …။😁 ~သွား မြန်မြန်ချိုးခဲ့ နံနက်စာပြင်ပီးပီ ဈေးလဲသွားပီးပီ မင်းနေ့လည်စားဖို့ မုန့်တေဝယ်ခဲ့တယ် ကွကိုယ်စားလိုက်နော် …။😁😁😁 ~ညစာ …
အချိန်ကြာလာလေ ပိုလှလာလေပဲ ဖြစ်နေစေဖို့ မိန်းခလေးတိုင်း ပြုလုပ်ရမယ့် အရာ (၈) ခု
အချိန်ကြာလာလေ ပိုလှလာလေပဲ ဖြစ်နေစေဖို့ မိန်းခလေးတိုင်း ပြုလုပ်ရမယ့် အရာ (၈) ခု ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချိန်တိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်သင့် ပါတယ်။ ဒီလို ဂရုစိုက်မှ အသက်ကြီးလေ ပိုလှလေ အချိန်ကြာလေ ပိုကြည့်ကောင်း လေဖြစ်မှာပါ။ ပျိုမေတိုင်း လိုလို နေ့စဉ်ပြုလုပ် ရမယ့် ဂရုစိုက် မှုလေးတွေ ကတော့…. (၁) အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ အခုနောက်ပိုင်း မိန်းကလေး အများစုက နောက်ကျမှ အိပ်တတ် ပါတယ်။ အိပ်ချိန်ကို သိပ်ဂရုမစိုက် ကြပါဘူး။ အိပ်ချိန်မှန်မှန် ထားဖို့ကို ရည်မှန်းချက် တစ်ခုအနေနဲ့တောင် သတ်မှတ် သင့်ပါတယ် …။ (၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်ပေးပါ တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါလောက်တော့ ကိုယ်ကြိုက် …
ချွေးနံ့ပြင်းတာ သက်သာအောင် ဒီ ၅ ချက် မှန်မှန် လုပ်ပေးပါ..
ချွေးနံ့ပြင်းတာ သက်သာအောင် ဒီ ၅ ချက် မှန်မှန် လုပ်ပေးပါ.. ၁။ ရေချိုးမပျင်းဘဲ နေ့တိုင်းနေချိုးပါ။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး နှစ်ခါတော့ ချိုးပေးပါ။ ရိုးရိုးရေနဲ့ ချိုးတာ ထပ်ဖြစ်နိုင်ရင် ရေနွေးနွေးလေးလေးနဲ့ ချိုးပေးပါ။ ၂။ ရေချိုးတိုင်း အနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့ ချိုင်းကို သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ပိုးသတ်ဆပ်ပြာသုံးပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ၃။ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး တစ်ခုခုသုံးပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆင်ပြေတဲ့ အမျိုးအစားချင်း မတူတာမို့ စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ပါ။ Roll on အနေနဲ့လာသလို Spray အနေနဲ့လည်း လာပါတယ်။ ၄။ ချိုင်းမှာ အမွေးအမျှင်တွေ ရှိနေတာက ချွေးနံ့ပိုအောင်းပြီး အနံ့ပိုပြင်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချိုင်းမွေး …
Total Users : 253614
Total views : 688399